Warar - Maxay yihiin faa iidooyinka ku jira isticmaalka koobka masturbay?
Koobka Diyaaraduhu waa badeecad jinsi oo caan ku ah ragga waxayna dabooli kartaa baahidooda siigaysashada. Laakiin dad aad iyo aad u tiro badan ayaa doonaya inay ogaadaan haddii ay wax u dhimeyso caafimaadka dadka?
Qalabka loo isticmaalo in lagu sameeyo koobabka siigaysiga waxaa badanaa loogu talagalay silikoon caafimaad oo aan sun ahayn, oo leh jilicsanaan dhexdhexaad ah iyo naqshad dhexdhexaad ah oo gudaha ah. Waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan qaab dhismeedka gudaha ee qofka dhabta ah, kaas oo beddel buuxa u noqon kara dumarka. Qaab dhismeedka gudaha ee koobka naas-nuujintu waa mid adag, oo la mid ah meelaha dumarka u gaarka ah. Markaad isticmaaleyso, waxay aad ugu dhowdahay dareenka qof dhab ah, kaasoo si weyn u wanaajiyay tayada siigaysiga. Markaa illaa inta aad u adeegsanaysid habka tilmaamaha, oo aad ugu fiirsato taxaddarrada, waxyeello uma geysaneyso jirka aadanaha. Hadda soo socota, waxaad arki kartaa faa'iidooyinkiisa markaad isticmaaleyso koob masturbay ah.
1, isticmaalka saxda ah ee koorsooyinka siigaysigu kaaama yeelidoono cuduro, sidoo kale uma baahnid walwal inaad gabdhaha ka dhigto uur iyo dhibaato kale. Waa toy-gaaga gaarka loo leeyahay ee kaa dhigaya inaad mashquuliso oo aad doonayso inaad wax u dumiso.
2, Uma baahnid inaad ka walwasho dareenka nuskaaga kale, ama waxqabadkaaga, koobka masturbay wuxuu ku siinayaa adiga gebi ahaanba madadaalo bannaan.
3, ha ahaato kali, ama nuskaaga kale kuma haboona wadashaqeyn, koobka masturbayku had iyo jeer wuu dabooli karaa baahiyahaaga. Way fududahay Qaadista iyo qarsoonida. Markaad safraysid, sidoo kale waa la qaadi karaa si mararka qaarkood ay u socdaan.
4, kacsiga galmada waa dabeecad bini aadam oo caadi ah, laakiin inta badan waxay keentaa dhibaatooyin badan, sida qishka, khiyaanada, qiimaha lacagta, cudurada iyo qalalaasaha bulshada. Koobabka diyaaraduhu waxay si ammaan ah u yareyn karaan damaca, ka fogaan karaan khaladaadka la sameeyo marka aad ka fekereyso jirka hoose, si aad si deggan ugu fikirto goobta shaqada.
5, koobabka diyaaradaha waxaa loo isticmaali karaa si loo weheliyo qeybtaada kale si loo kordhiyo madadaalo galmo, khibrado badan oo saaxiibo dumar ah ayaa muujinaya in koobabka diyaaraduhu ka caawin karaan inay fahmaan ninkooda falsafada jir ahaaneed iyo nafsiyadeed, galmada ka dhiga mid isku duuban, laakiin sidoo kale inta lagu jiro xilliga jir ahaaneed iyo uurka Muddo si ay u daboolaan baahidooda kale, sidaa darteed dumar badan oo saaxiibo ah ayaa sidoo kale ninkeeda u iibin doona koob diyaaradeed oo raaxo leh.